Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Somaliland: Dowladda Farmaajo ayaa Joojisay Wadahadallada, cunaqabateyna saartay Somaliland | SAHAN ONLINE
Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Somaliland: Dowladda Farmaajo ayaa Joojisay Wadahadallada, cunaqabateyna saartay Somaliland
JABUUTI – Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, wuxuu sheegay in wadahadalada ay joojisay dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo isla markaana ay cunaqabateyn saartay.
Maxamed Yoonis Biixi ayaa hadalkaan ka jeediyay shir ay soo qabanqaabisay Machadka Heritage oo lagu qabtay dalka Jabuuti.
…” Arrinta wadahadallada aniga ayaa hoggaaminayay markii aan ahaa Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland ,marna Turki baa la isugu yimid,marna Jabuuti,Somaliland diyaar bey u tahay wadahadallada,dowladda maanta jirta ee labada sano dhameysanaysa ayaa joojisay wadahadalka…” ayuu yiri.
Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in Madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif Iyo Xasan Sheekh,markii ay xukunka hayeen ay wadahadalladu sii socdeen,balse dowladda Farmaajo ay wadahadallada joojisay ,cunaqabateyna saartay Somaliland.
…” Dowladda maanta jirta ee labada sano dhameysanaysa, wadahadallada waa joojiyeen ,waxay keeneen cunaqabateyn iyo cadaawad aan loo baahneyn,dadkii wada dhashay ee Soomaalida kala fogeysay oo ay tiri kuwaan yaa waxba la siin…” ayuu yiri.
Ugu dameyn, Maxamed Biixi Yoonis ayaa tallo ahaan kusoo jeediyay in wadahadallada dib loo bilaabo,laguna qasbo dowladda Federaalka Soomaaliya in wadahadalka dib u bilowdo,ayna noqdaan kuwa natiijo leh oo macno leh.